Maraykanka oo ‘qoranaya’ magacyada dadka kasoo horjeeda go’aankiisa Qudus - BBC News Somali
20 Disembar 2017
Image caption Golaha ammaanka
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay diiwaangashan doonto shaqsiyaadka iyo dalalka kasoo horjeedsada go'aanka ay ka gaartay arrimaha Qudus.
Hadalkan ayaa waxa uu soo baxay kadib codka la filayo in go'aankaas lagu dhaleeceeyo kadib kulan uu barito yeelanayo Golaha Loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay.
Wakiilka Maraykanka ee Golaha Ammaanka Nikki Haley ayaa dalalka xusuusisay in madaxweyne Trump uu iyada faray in ay ku wargaliso dalalka kasoo horjeedsada go'aanka Maraykanka safaaradiisa ugu rarayo magaalada Qudus.
Qaraarka la horkeenay Qaramada Midoobay ayaa inkasta oo magaca Maraykanka uusan ku xusnayn, haddane waxa uu ku baaqayaa in go'aanka kasta oo ku saabsan Qudus uu yahay mid sharci darro ah.
Maqaamka magaalada Qudus ayaa udub dhexaad u ah xasaradaha mudada dheex ka dhex aloosan Israa'iil iyo Falastiniyiinta.
Dunida Muslimka oo dibadbaxyo uga jawaabtay go'aankii Trump ee Qudus
Erdogan: Arrinta Qudus Muslimiinta waxay ug dhigan tahay khad cas
Erdogan: Qudus waa "in ay noqoto caasimadda Falastiin"
Israa'iil ayaa sanadkii 1967-dii dagaal ku qabsatay bariga magaalada Qudus, halkaas oo ay Jordan ka talin jirtay, waxayna u aragtaa in ay tahay caasimadeeda.
Sheegashada Israa'iil ee Qudus ayaanan waligeed la aqoonsanin caalamka oo dhan, dowladda adduunka oo dhana waxa ay safaaradahooda geysteen magaalada Tel Aviv, balse madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay in safaaradda Maraykanka uu u raro magaalada Qudus.
193-da dal ee ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa maalinka khamiista qabanaya shir aan caadi ahayn oo degdeg ah, kadib codsi ka yimid dalalka Islaamka ah iyo kuwa Carabta ah, kuwaas oo cambaareeyay go'aanka Trump.
Halley ayaa ka digtay in codkan uu yahay mid si shaqsiyan ah u taaban doona madaxweynaha iyo Maraykanka, islamarkaasna aanan la hilmaami doonin.